सिकाई प्रक्रियाका लागि नगरको बसाई ठीक हो – सापकोटा
By vijayafm on	 August 1, 2017 अन्तरवार्ता, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय, स्थानीय तह
गैँडाकोट नगरपालिकाको वाड नं. ९ जहाँ सामान्य समस्याका कारण स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । बाटोघाटो, जंगलीजनावरको आक्रमण, सिंचाईको अभाव यस्तै समस्या ८ का वडा बासीले भोग्दै आएका छन् । यीनै विषयमा वडा अध्यक्ष प्रेमप्रसाद सापकोटासंग कुराकानी गर्दैछौँ । प्रस्तुत छ सापकोटासंग सम्पादक श्रीधर उपाध्यायले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पदित अंश ।
वडाका कुन कुन समस्याले तँपाईको मन चस्स विझाउँछ ?
मलाई चाँही निर्वाचनको पक्रियासंगसंगै यस्ता समस्या छन्, घरहरुमा एम्बुलेन्स पुग्न नसक्ने, विद्यार्थीहरु खोला, खाल्डा खुल्डी तर्न नसक्ने, विभिन्न बाटोघोटाका समस्या छन् ।
यसको समाधानका लागि किन तत्काल काम सुरु गर्नुभएको छैन ?
होइन, मैले केही समय कुरौँ भनेको छु सबैलाई । किन भने यो वर्षाको समय हो । बजेट थोरै हुन्छ, थोरै बजेटले गरिएका काम बर्षाको हिलोले त्यसै खत्तम पारिदिन्छ, त्यसैले असोजबाट ती बाटोमा काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ, काम भएपछि पनि स्थानीयले सुविधा पाउनेछन्, काम काम जस्तो पनि हुने छ । अहिले त बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने छ । यसकारण केही समय कुरेका छौँ ।
कुन कुन बाटो हुन् जुन अहिले हिंडडुल गर्न समस्या नै परेको छ ?
गैँडाकोट ९ का हाइवेसंग जोडिएका बाटोहरु सबै मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । बाँधखोला देखि गैरीखोलासम्म आउने बाटो अहिले प्रमुख समस्याको बाटो बनेको छ । यो बाटो व्यवस्थित पनि छैन, यसमा विगतमा धेरै बजेट समेत खेर गइसकेको छ । पहिले गाविस हुँदा पनि त्यहाँ ग्राभेल गर्ने डोजर लगाउने काम समेत भएको हो । पछि एकपटक रिंगरोडको फेरी एक पटक डोजर लगाइयो । बाटो सम्मै छ । अहिले खाल्डाखुल्डी छ । हिँडडुल गर्न असहज छ । अहिले त्यही बाटोको तत्काल ग्राभेल गर्ने योजना बनाएको छु । माथिको मुख ताकेर बस्नुपनि जायज होइन ।
अरु समस्या के के छन ?
विद्युत पुगेको छैन, जंगली जनावरको आक्रमण बढ्दो छ, बन क्षेत्रमा तारबार लगाउन प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
बाटोको समस्या समाधानकालागि के हुँदै छ ?
झुट्टा आश्वासन मसंग छैन । आगामी दिनमा आउने बजेटको सहि सदुपयोग हुने प्रतिवद्धता सुरुमै व्यक्त गर्न चाहन्छु । थुम्सीको कंडेल टोल हुँदै खेल मैदानसम्म पुग्ने बाटोको निर्माणका लागि २० लाख रुपैँया छुट्टाएको छु । यो ढल सहितको पीच बाटो हुनेछ । ढलनिकास नभएका बाटोका लागि योजना पर्ने छैन । जेनेरेटर टोलविकास संस्था अन्तर्गत किच्कीनी खोला देखि मनाङे टोलसम्म पुग्ने बाटो साँघुरो छ । यस बाटोको ट्रयाक चाक्लो बनाएर खोल्ने र यस वर्ष ग्राभेल गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । यसका लागि पाँचलाख रुपैँया बाटो छुट्टाइएको छ । बाँध खोला देखि गैरीखोलासम्मको बाटोलाई करिब २ लाख रुपैँया ग्राभेल गर्ने योजना बनाएको छु ।
दीर्घकालिन योजनामा परेका बाटो कुन हुन ?
बाँध खोला देखि गैरीखोलासम्मको बाटोको निर्माण पनि दीर्घकालिन योजनामा परेको बाटो हो । यो रिंगरोडको अवधारणमा परेको बाटो समेत हो । हामी जयश्री खोलकाको किनारदेखि नारायणी नदि किनार हुँदै बाँधखोल र जयीश्री खोलाको पश्चिमी किनार जनु ९ नम्बर वडा को दक्षिणी किनार र समग्र खोलाको पश्चिमी किनार हुँदै हामी विश्वकर्मा बाबाको मन्दिरसम्म बाटो खोल्न सकियो भने यो वडाको विकासका लागि सहायकसिद्ध हुने विश्वासका साथ योजना बनाइरहेका छौँ ।
पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पनि यसले सहजता थप्छ की ?
अवश्यक यसले पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन पनि सहजता थप्ने छ । साथमा हामीले हनुमान मन्दिर भएको क्षेत्रलाई, बौद्ध गुम्बा भएको क्षेत्रलाई पर्यटकी क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भनेर योजनामा पारेका छौँ । यो पनि दीर्घकालिन रुपमा गर्ने काम अन्तर्गत राखेको छु । गैँडाकोट ९ को विकासका लागि थोरै बजेटले काम गर्दैन यसका लागि राष्टिय स्तरबाट पनि बजेट पार्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भरपुर पहल गर्ने छु । प्रदेश र केन्द्रबाट पनि सम्भावना देखेको छु । अहिले पनि हनुमान मन्दिर र बौद्ध गुम्बा क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन भइरहेको छ । दिनहुँ भारतबाट आएका तीर्थालुहरु त्यहाँ बस्ने गरेका छन् ।
गँैडाकोट ९ धेरै बोरिङ भएको क्षेत्र, सिंचाईका लागि केही प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
सामान्य मान्छेले पनि बोरिगं गरेर सिंचाइ गरिरहेको अवस्था छ । सिंचाइका लागि कुलाको पानी नहर नभएको अवस्था भने छ । मैले गैरी खोलामा एउटा तालको निर्माण गर्ने । यस तालको पानीले स्थानीयलाई तरकारी बाली, अन्यबाली लगाउन सहजता पुराउन योजना बनाएको छु । यो पनि दीर्घकालिन योजनामा छ । धवाहमा अहिले एउटा काम सुरु भइरहेको छ । वडामा रहेका सामुदायिक वनसंग सहकार्य गरेर तालको निर्माणका लागि समेत पहल गर्नेछु ।
स्थानीय किसानका समस्या समाधानका लागि जेटिए व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
हो यहि कुरा म नगरपालिकामा उठाउँदैछु । जेटिएको अवस्था गैँडाकोट नगरपालिकामा हुनुपर्दछ । यो पनि मैले भनिरहेको छु । पशुविज्ञ डाक्टर पनि चाहिन्छ । यसका लागि प्रयास पनि भइरहेको छ ।
वातावरण मैत्री वडा कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
यसका लागि सचेतना कार्यक्रम अघि बढाउँदै छु । सरसफाई नै पहिलो सूचक हो । यो सूचक अथवा मापदण्ड पुरा गर्न का लागि टोलविकास संस्थाहरुलाई भनिरहेको छु । होटल लाइनका टोललाई समेत भनेको छु । बाँधखोला टोलविकास संस्था अलि टाढा छ । यहाँ भर्खर बालक्लब गठन भएको छ । हामीले काम अघि बढाएका छौँ । हाम्रो वडामा चारवटा टोल रहेका छन् ।
थुम्सीको जंगलमा फोहोर फालेर वातावरणमैत्री कसरी बन्छ ? ढुंग गन्हाउने बाहेक अरु के होला र ?
हो यो कुरा पनि मैले नगरपालिकामा भनिरहेको छु । यो काम बन्द गरौँ । व्यवस्थापनको राम्रो उपायका विषयमा कुरा गरौँ भनिरहेको छु । नगरप्रमुखले यही वर्षभित्र फोहोर फाल्ने स्थानको विकल्पको खोजी भइरहेको बताउनुभएको छ । छिट्टै यो पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु ।
गैँडाकोट ९ मा विजुलीबत्तीको समेत समस्य छ नि ?
हाम्रो बाँध खोला टोलसुधार समिति क्षेत्रभित्र बत्ति पुगेको छैन, त्यस क्षेत्रमा कम घरधुरी छ । गुम्बा टोलको सबै क्षेत्रमा पनि विजुली पुगेको छैन । कसैले लगेको पनि लामो तार बनाएर लगिएको छ । भुँइमा लत्रिएको छ । यसको समाधानका लागि नगरपालिकामा कुरा गरिरहेको छु ।
कति वटा पोल आवश्यक छ गैँडाकोट ९ मा ?
अहिलेको स्थितिमा गैँडाकोट ९ मा ४० वटा बिजुलीका पोल आवश्यक देखिएको छ । नगरप्रमुख यसको समाधानका लागि विद्युतप्राधिकरणको सहकार्यमा यसको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ की भनेर पहल गरिरहनुभएको छ ।
जंगली जनावरको आक्रमण नियन्त्रणकालागि के गर्नुहुन्छ ?
यसमा दुई वटा कुरा छ । घरपालुवा जनावर छोड्ने पनि भएको छ । जसले व्यवसाय गरेको छ । व्यवसायबाट लाभ लिने लाभ लिन नसकेपछि सडकमा छाड्ने गलत प्रवृत्ति हो । अब अर्को कुरा जंगली जनावरको आक्रमण । यस विषयमा केही दिन अघि हाम्रा साथीहरु कसरमा पुगेर गैँडाको आक्रमणको नियन्त्रण गर्न छलफल समेत गर्नुभएको छ । तारबारका सन्दर्भमा समेत केही पहल भएको छ । छलफल अघि बढेको छ । नन्दन सामुदायिक बन र भेडबारी सामुदायिक बनभित्र बाघको आक्रमणबाट दुई महिलाको ज्यान गयो । विशेष क्षेत्रमा हामीले केही तारजालीको व्यवस्थापनका लागि पनि नगरपालिकामा प्रस्ताव अघि बढाएको छु ।
लागूपदार्थको समस्या कस्तो छ ?
मैले नगरपालिकाको पहिलो मिटीगंमा जुनसुकै समयमा मदिरा बेच्न नपाउने, जतिसुकै उमेरसमूहका व्यक्तिलाई मदिरा विक्रिमा रोक लगाउने नीति बनाऔँ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको छु । हाम्रो वडामा मात्र होइन, सबै वडामा एक साथ नीतिका साथ अघि बढ्न सकियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ । यसले युवा विग्रने समस्यालाई सबै भन्दा बढी रोक लगाउने छु ।
शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम के के छन् ?
हाम्रो वडामा एउटा पनि विद्यालय छैन । मलाई के लाग्छ भने पाँच वर्षभित्र एउटा आधारभूत भएपनि एउटा विद्यालय खोल्न मैले पहल गर्नेछु । मापदण्डको लागि पनि एउटा विद्यालय आवश्यक ठानेको छु । सार्वजनिक जग्गाको कमी छ । अहिले जग्गा किनेर पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि कठिन नै हुन्छ । गैँडाकोट ७ को नारायणी माविलाई आफ्नै विद्यालयको रुपमा मानेका छौँ ।
वडा कार्यालय नगरपालिकामा छ यो ठीक हो ?
अहिले तत्कालका लागि ठीक हो जस्तो लाग्छ । नयाँ संविधानको कार्यन्वयनमा छाँै । स्थानीय तहका विविध कार्य छन् । यो सबै पक्रिया बुझ्न र सीकाई पक्रियाका लागि पनि नगरपालिकामै अहिले वडा कार्यालय हुनु ठीक हो जस्तो लाग्छ । अहिलेका निति नियम कानुनका कुरा सचिवलाई समेत थाहा हुँदैन हामीलाई झन् बुझ्न कठीन छ । यो सिकाई पक्रियामा छौँ । केही समयपछि हामी वडा कार्यालय स्थापना गर्नेछौँ ।
वडा कार्यालयका लागि ठाँउ हेर्नुभएको छैन ?
हेरेका छौँ । विकल्पका रुपमा रहेका ठाँउ छन् । किच्कीनी खोला नजिक हेरेका छौँ । त्यहाँ ढाई तीन कठ्ठा जग्गा निस्कन्छ । अर्को गौली ग्रुपमा पनि सार्वजनिक जग्गा छ । त्यहाँ पनि हेरीरहेका छौँ । मंसीर तीर खेतीपाती सकिएपछि सार्वजनिक जग्गा छुट्याएपछी वडा कार्यालयका लागि ठाँउ फिक्स गर्नेछौँ ।
धन्यवाद यहाँहरुलाई पनि । मेरा कुरा सेवाग्राही अझ विशेषगरी वडाबासीहरुलाई सुनाउने जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि विजय एफ एम र विजय खबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।